Qasabadda Musqusha ee Madow Madow | WOWOW Qasabadaha Qubayska
Tubooyinka Ugu Jikada Fiican 2020 | Tubooyinka Ugu Jikada Fiican | Qasabada jikada
Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Qubeysashada Qolka Musqusha Oo Kaliya / WOWOW Markab Maraakiibta Siigada Matte Black
Matt Black Room Room Faucet wuxuu ku siinayaa naqshadeyn iyo tayo ahaan hal. Waxqabadka muuqda iyo
qaab cajiib ah oo xarrago leh. Soo iibso tubada dharka lagu dhaqdo ee musqulaha madow hadda!
2321501B tilmaamaha rakibaadda
Qolka musqusha ee madow Madoow 2321501B
Naqshadaynta qolkaaga musqusha ayaa ah mashruuc abaal marin leh. In kasta oo sida caadiga ah aadan waqti badan ku haysan musqushaaga, waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa meeshan inaad ku nasato muddo dheer, tusaale ahaan biya-mareenkaaga. Si kastaba ha noqotee, waa inaadan waligaa ka fekerin saameynta qolkaaga musqusha. Waxay noqon kartaa qayb ka mid ah qaabeynta guud ee gurigaaga waxayna u qalantaa waqtigaaga inaad si fiican uga fikirto xagga naqshadeynta iyo waxqabadka.
Musqusha waa inay kuusoo bandhigto iskudheellitir labada qaab iyo shaqeyn. Hawsha ayaa muhiimad weyn leh, maadaama inta badan aad kaliya rabto inaad isticmaasho howlaha aasaasiga ah ee musqusha. Tusaale ahaan qubaysiga iyo cadayga ilkaha markii aad ku deg degayso subaxdii. Dhanka kale, gaar ahaan marka aad kujirto xaalad xasilloon oo maskaxdaadu kujirto, runti waad ku raaxeysan kartaa naqshadaha musqushaada, waxaad ku dabaalan kartaa tubbada qubeyskaaga tusaale ahaan. Waxa ugu wanaagsan ee naqshadda musqusha ayaa ah, inaad ku abuuri karto hal abuurkaaga dhammaantood. Waxaa jira malaayiin ikhtiyaar ah markaad ku talajireyso musqusha, iyo wax kastoo aad go aansato, waxaad lahaan doontaa qurux u gaar ah oo uusan qof kale lahayn Adiguna waxaad tahay qofka kaliya ee naqshadeeya. Naftaada waad ku dhiirrigelin kartaa joornaalada iyo websaydhada, laakiin aakhirka adiga ayaa go’aaminaya sida musqushaadu u ekaan doonto.
Qubayska musqusha oo keliya oo madow
Markaad naqshadayso suuligaaga musqusha, waa inaadan waligaa qaawin saameynta tubooyinka musqulaha. Maaddaama tubooyinka qubaysigu ay yihiin barta dabiiciga ah ee musqulaha, dadku marwalba waxay fiiriyaan tubooyinkaaga marka hore. Sidaa daraadeed waa inaad had iyo jeer doorataa tubooyinka musqushaada si taxaddar leh. Shaqada ka sokow, waxaad dooneysaa in musqushaadu ay soo jiidato isla markaana muujiso qaab aad ku faani karto. Taas macnaheedu waa inaadan waligaa uga tagin doorashada nooca tubooyinka musqulaha ilaa dhamaadka marka aad dhismayso musqushaada. Waa inaad tubooyinka jikada horeyba qayb muhiim u ah ka qaaddaa qolka musqusha.
Xagga qubayska musqusha, waxaad ka dooran kartaa dhowr nooc oo tubooyinka musqulaha. Waad dooran kartaa labada jeer tubbada dharka lagu qubeysto ama tubbada musqusha oo keliya. Xirmooyinka qolka musqusha oo keliya ayaa sidoo kale loo yaqaan tuubooyinka musqulaha hal god ah. Faa'iidada ugu weyn ee tubooyinka musqulaha hal mar waa inaad awood u leedahay inaad gacanta ku xakameyso heerkulka biyaha hal gacan kaliya. Faa'iido kale waxay la xiriirtaa fududeynta rakibida. Maadaama aad kaliya u baahan tahay hal dalool, way fududahay in la rakibo tubbada musqulaha hal god ah. Tubooyinka musqulaha kelida ah waxay ku yimaadaan nooc kasta iyo noocyo iyo naqshado. Qolka dharka lagu xiro ee musqusha madow ee WOWOW wuxuu ku siinayaa naqshad xarrago leh oo runtii u eg midabka goos gooska ah midab geesi ah oo midab leh.
Qasabad suuliga madoow ee Stylish & functional
Qolka dharka musqusha ee casriga ah oo qurux badan hadana shaqeynaya ayaa WOWOW labadaba waa mid fudud oo aan waqti lahayn. Hal inji kasta oo qalabkan wanaagsan ah ee agabka musqusha waxaa loo habeeyay si taxaddar leh si looga hortago wax kasta oo xoqmaya ama xoqmaya. Sidaa daraadeed had iyo goor waa suurtagal in la maydho oo la ilaaliyo tubada musqusha madow ee ku habboon musqusha si ay uga dhigto qaab fiican. Dahaarka khafiifka ah ee madow ayaa leh tubbada musqusha oo leh muuqaal casri ah oo dhisi doona qayb muhiim u ah musqusha kasta. Ka sokow waxaad ka heli kartaa tuubbooyin musqulood oo la mid ah oo loogu talagalay musqushaada iyo tuubada qubayska, tusaale ahaan, si aad u sameyso hal qayb oo isbarbardhiga musqusha inteeda kale.
Qolka musqusha buluuga ah ee arc-ga oo sarreeya ayaa leh silhouette gooseneck ah oo shaqeynaya 5.8 inji. Musqusha musqusha waxay siisaa meel ku filan oo dhaqitaan hufan. Qulqulka biyuhu waa mid deggan oo deggan. Ka sokow, walwalkaan aadka u sarreeya waa anti-splatter, sidaa daraadeed dharkaaga ha qarin doonin intaad naftaada ku maydhaysid saxanka musqusha. Ugu dambeyntii maahan inaad fidiso calaacashaada si aad u gaarto biyaha, maaddaama naqshadeynta cusub ee gooseneck ay ku siinayso biyo meesha aad ugu baahan tahay. Si aad u dhammaystirto nashqadeyntaada, waxaad ka heleysaa gool-haye ka kooban si aad u sameyso hal iskumid oo iswaafaqsan musqushaada.
Qolka musqusha ee madow madow oo tayo fiican leh
WOWOW waxay u isticmaashaa qalabka ugufiican tayada tubooyinka musqusha. Qalabkeeda casriga ah ee waxsoosaarka farshaxanka ayaa dammaanad qaadaya talaabooyinka saxda ah iyo la-qabsiga dhammaan waxyaabaha kujira. Qubayska musqusha ee WOWOW sidaas darteed waa hal unug oo tayo-sare ah oo loo sameeyay waxqabadka ugu sarreeya. Tan micnaheedu maahan in sheygan la jaanqaadi karo Qandaraaska birta ee Mareykanka lagu yaqaan. Diskiga dhoobada-dhoobada ah ee faashadda musqusha madow ee WOWOW si adag ayaa loo xiray. Baadhitaanno la sameeyay ayaa muujinaya in diskiga bilaashka ah ee birta sifiican uusan wali u dabacsaneyn ka dib 500,000 wareeg.
Gacanta korantada ee tubada qolka musqusha ee WOWOW waa mid aad u dabacsan. Waxaad si fudud u xakameyn kartaa heerkulka biyaha laakiin weli waxay ku siinaysaa xajin ku filan si aad u maamusho cabirka heerkulka. Intaa waxaa u dheer, tubada dharka ee musqusha madow ee matte madow waxay leedahay cimri dheeri ah maadaama jirka tuubada laga dhisay naxaas adag oo ay weheliso waxyaabo tayo sare leh. Markaad gacanta ku qabato tubada dharka musqusha madow ee WOWOW gacmahaaga, isla markaaba waxaad arki doontaa tayada ay bixiso.
Qolka musqusha madow ee qiimaha jaban
Adeegsiga agab tayo sare leh, WOWOW ayaa wali kuu suura gelin kara tuubada jikada madow qaanso qiima macquul ah. WOWOW marka ugu horreysa waa ogtahay meesha laga iibsado alaabta ceeriin qiimo macquul ah. Marka labaad, xarumaha waxsoosaarka casriga ee WOWOW waxay dammaanad qaadayaan wax soo saar qiime jaban. Sidan ayaad uga faa'iideysaneysaa faa iidooyinkaas waxaana laguugu hubinayaa koronto qayaxan oo tayo sare leh oo leh dharka musqusha madow oo leh qiimaha ugu fiican ee aad ka heli doonto. Markaad iibsanayso tubada biyaha musqusha ee WOWOW, waxaad heli doontaa waxkasta oo aad ugu baahan tahay inaad ku rakibto tubada qolka musqusha madow si dhib yar. Ka sokow mashiinka mashiinka bololka ka soo baxa, waxaa kale oo ka mid ah iskuduwaha isugeynta ah ee loogu talagalay rakibidda 1 ama 3 dalool sidoo kale. Waxaad ka heli doontaa xiriirada biyaha ee aad ugu baahan tahay si aad si sahlan ugu rakibtid. Dhamaan tubooyinka musqusha ee WOWOW waxay ugu dambeyntii la imaanayaan muddo 5 sano oo damaanad ah, 90-maalmood oo lacag celin ah iyo dammaanad qaali ah oo caalami ah!
Faa'iidooyinka musqulaha buluuga ah ee matte madoow marka loo eego:
Bathroom Waxay ku siinaysaa walxo-kiinad musqul kasta
Midab madow oo jilicsan
Design Naqshad casri ah oo naqshadeyn leh
 Way fududahay in lagu daro tuubbooyinka musqulaha kale ee madoow
 Waxay ka samaysan yihiin alaab naxaas ah oo tayo sare leh
SKU: 2321501B Categories: Qubeysashada Qolka Musqusha Oo Kaliya, Qubeyska Musqusha Tags: saxanka saqafka, tubbada dharka lagu xiro, markabka weelka
WOWOW Single Handle Musqul Fucet Matte Black
La iibiyey: 27